अघिल्लो कार्यकालमा शुरु भएका काम अब पूरा गर्छु, शैक्षिक क्षेत्रमा बढी ध्यान दिन्छु : चिरीबाबु महर्जन – Nepal Views
काठमाडौं उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकामध्ये अहिले कुनै पनि आफैँ फोहर व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सरकारले निर्माण गरेको बञ्चरेडाँडाको संरचना सम्पन्न हुन लागेको छ। संघीय सरकारका तर्फबाट त्यो हस्तान्तरण भएपछि फोहरको मात्राका आधारमा रकम तिर्न हामी तयार छौँ।
ललितपुर। कलाको नगरी ललितपुर महानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि चिरीबाबु महर्जन नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा युवा अनुहारका रुपमा प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित हुँदै गर्दा ललितपुरमा भने पाका व्यक्ति महर्जन नै दोहोरिएका हुन्।
पहिलो कार्यकालमा महानगरमा भएका विकासका काम र सरल व्यक्तित्वकै कारण उनी पुनः विजयी भएका महानगरबासी बताउँछन्। विगतमा तीन पटकसम्म वडाध्यक्षका रुपमा काम गरेका उनले ज्यापु समाजको अध्यक्ष भएर काम गरे। उनसँग राससले गरेको संवाद:
पहिलो कुरा मेले आफैँले पहिले शुरु गरेका काम पूरा गर्नुपर्छ। एशियाली विकास बैंकसँग ५४ करोड रुपैयाँ अनुदानमा सम्पदा क्षेत्रमा ट्र्याक लाइन परियोजना अघि बढेको छ। यो काम अहिलेसम्म ६० प्रतिशत सकियो र ४० प्रतिशत बाँकी छ, त्यो सकाउनुपर्छ। अहिले बेस्सरी पानी पर्दा पाटन दरबार क्षेत्रमा जलमग्न बन्छ। ढुंगेधारामा पानी जम्छ। परियोजना पूरा भएपछि त्यो हट्नेछ।
दोस्रोमा राजदल गणसँग समझदारी गरेर ३० रोपनी जग्गा फिर्ता लिइएको छ। त्यो जग्गा लगनखेलको अशोक स्तूपाको दक्षिण र पश्चिममा पर्छ। त्यहाँको पोखरीमा साढे दुई वर्षमा कमलका फूल फुलाउने लक्ष्य छ। त्यो ठाउँमा उत्तरमा सप्तपाताल पोखरी छ र सेनाको क्षेत्रमा रहेको पोखरी गरी जम्मा ४५ रोपनी जग्गा त्यहाँ छ। त्यहाँ ‘ग्रिन एण्ड ब्ल्यू फ्युजन प्रोजेक्ट’ बनाउने योजना छ। त्यसका लागि अध्ययन भइसकेको छ। सेनाको क्षेत्रमा भित्र जान नसकिने भएकाले बाहिरबाट हेर्न मिल्ने गरी बार लगाइनेछ।
हामीले तेस्रो स्मार्ट सडक बत्ती जडान थालेकामा पहिलो चरण सकियो। दोस्रो चरणमा तीन हजार चार सय बत्ती जडान गर्दैछौँ। चक्रपथमा पनि स्मार्ट बत्ती राख्न लागिएको छ।
महानगर कला नगरी हो र यहाँ प्रशस्त सम्पदाहरु छन्। मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई राम्रोसँग हेरचाह गर्नुपर्छ। प्रत्येक सम्पदामा सुधार भइरहेको छ। भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भीमसेन मन्दिर सरकारसँग कति पनि पैसा नलिई पुनःनिर्माण गरिएको छ। सरकारसँग पैसा लिँदा ठेक्कामा काम गर्नुपर्छ र ठेक्कामा गर्दा त्यसको गुणस्तर कायम नहुने भएकाले चन्दा संकलन गरेर त्यसको निर्माण गरिएको छ। सम्पदाका ५/६ ओटा परियोजना जारी छन् र त्यो पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।
पाँच वर्ष पहिले महानगर बनाउन ललितपुर उपमहानगरपालिकामा हिजोका गाउँपालिका र कार्यविनायक नगरपालिका जोडिएको छ। नयाँ थपिएका वडामा विकास भइसकेको छैन। उपमहानगरपालिकामा पर्ने पुल्चोक, जावलाखेल, लगनखेल, नटोल, गाबहालमा विकास गर्न त्यति आवश्यक छैन। त्यसैले चक्रपथ बाहिरका वडामा लगानी बढाएर पुराना वडाको स्तरमा ल्याउन नीति परिवर्तन गरेका छौँ। रातारात नभए पनि अबका पाँच/सात वर्षमा त्यो ठाउँको विकास यहाँको हाराहारीमा आउने छ।
मैले अघिल्लो कार्यकालमा गर्न नसेकका कुरा खासै छैनन्। हामीले ९० प्रतिशत काम गर्‍यौँ। गर्न नसकेको पनि हाम्रो कारणले होइन। विगतमा फ्लाइओभर बनाउने भनी अध्ययन भयो र यसको सम्भावना छ भनी अध्ययनले देखाएको छ। काठमाडौंमा जाइकाले माइतीघरबाट त्रिपुरेश्वरसम्मको फ्लाइओभर निर्माण गर्न अध्ययन गरेको थियो।
उताबाट निर्माण हुँदा यता पुल्चोकको अशोक स्तूपाबाट एक दशमलव चार किमीमा फ्लाइओभर बनाउने हामीले योजना बनाएका थियौँ। उता अहिले त्यो बन्ने सुर छैन। हामीले हतारिएर बनाउँदा त्यसलाई लगेर जोड्ने ठाउँ छैन। त्यसैले फ्लाइओभर हामीले अहिले रद्द होइन स्थगित गरिएको छ। काठमाडौंले माइतीघर–त्रिपुरेश्वर खण्डमा बनाएमा हामी पनि बनाउन सक्छौँ।
अघिल्लो पटक घोषणापत्रमा उल्लेख भएका र नभएका काम गरेका छौँ। हामीले भीमसेन मन्दिर बनाउने पुल्चोकको समयफाल्चालगायत ७७ पाटीपौवा बनाउने योजना थिएन। पाटनमा अनुदानमा ट्र्याक लाइन बनाउने योजनामा थिएन। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई उहाँको एक सयौँ जन्मदिन मनाउने कुरा होस वा कोभिड संक्रमणमा नागरिकलाई सहयोग गर्ने कुरा चुनावी घोषणापत्रमा नभए पनि हामीले गरेका छौँ।
विगत पाँच वर्षमा हामीले अतुलनीय प्रगति गर्‍यौँ। उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सबै आवश्यक बाटोमा ढुंगा र इँटा छाप्ने काम भयो। अब त्यहाँ काम गर्न ठाउँ नै छैन। त्यसको आवश्यकता चक्रपथभन्दा बाहिरी वडामा छ। नीतिमा परिवर्तन गरेर बाहिरी वडामा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ। केन्द्रीय, प्रदेशस्तर, नगरस्तरिय योजना बाहिरी वडामा दिएका छौँ। हिजोका नगरका वडाभन्दा बाहिरी वडामा बढी बजेट छुट्टाइनेछ।
साइकल लेन निर्माण भयो तर छुट्टै लेन नभएकाले अझै सुरक्षित नभएको कुरा उठ्छ। साइकल लेन विकास र विस्तारको योजना के छ ?
अहिले हाम्रा जति पनि सडक छन् त्यो विसं २००७ भन्दा पहिले बनेका हुन्। हामीसँग सडकको लेन चित्त बुझ्दो छैन। त्यही साँघुरो सडकमा साइकल लेन बनाउन गाह्रो भएको हो। साइकल लेन दुई किसिमको हुन्छ एउटा सेयर लेन जहाँ साइकलले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ तर साइकल नहुँदा अरु सवारी साधन पनि जान सक्छ। दोस्रो डेडिकेडेट लेन हुन्छ जहाँ साइकल नहुँदा पनि अरु सवारी साधन जान पाउँदैन। अहिले पुरानो सडकमा हामीले साढे ३२ किमी सेयर लेन बनाएका छौँ।
चक्रपथको विस्तार भएको खण्ड ललितपुरमा सात दशमलव नौ किमी पर्छ। त्यस खण्डमा सर्भिस ट्र्याकमा साइकल लेन बनाउन ठेक्का दिइसकिएको छ। दुवैतर्फ गरेर १५ दशमलव आठ किमी साइकल लेन बन्न गएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन्छ।
मेरो सोचाइ के छ भने ललितपुर महानगरले बनाएको जस्तै साइकल लेन छिमेकी नगरपालिकाले पनि गर्दा राम्रो हुन्छ। उत्तरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले महाराजगञ्जसम्म र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले शिवपुरीसम्म र दक्षिणमा गोदावरी नगरपालिकाले वनस्पति उद्यानसम्म साइकल लेन बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ। गोदावरीबाट शिवपुरीसम्म ४२ किमी लम्बाइ छ। आगामी दिनमा अन्तरनगरपालिका साझा परियोजनाका रुपमा यसलाई अघि बढाइनेछ। बागमती करिडोरको उचाइ नदी जसरी बगेको छ सडक साइकल लेन उपयुक्त छ।
हामीसँग अहिलेसम्म साइकल लेनको कानून छैन। हामीले कानून निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ र अब नगर सभाबाट पास हुनुपर्छ। अहिले साइकलसम्बन्धी संघीय र प्रदेश दुवै सरकारको कानून छैन।
सवारी साधनको चाप बढिरहँदा पैदल यात्रुलाई सडक वारपार गर्न गाह्रो भएको देखिन्छ। आकाशे पुल निर्माणको योजना छ ?
हामीले एकान्तकुनामा यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकै आकाशे पुल बनाउने भनी डिजाइन गरेका थियौँ। सडक विभागले हामीलाई अनुमति दिएन। विभाग आफैँले प्रत्येक एकएक किमीमा आकाशे पुल बनाइरहेको छ। अहिले उपत्यकाका आकाशे पुल अहिले चढ्दा र झर्दा थकाइ लाग्ने र हेर्दा नै नचढौँ जस्ता छन्। मेरो आकाशे पुलमा भर्‍याङ र लिफ्ट दुवै राख्ने, कफिसप र शौचालय राख्ने अवधारणा थियो। त्यो नमूना सफल भएमा अरुतिर गर्ने योजना थियो।
हामीले २१ औँ शताब्दीको स्मार्ट ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने योजना बनाएका छौँ। हामीले अब जडान गर्न बत्ती एउटा बत्ती अर्काे स्थानको बत्तीसँग आपसमा सञ्चार गर्न सक्ने किसिमको हुनेछ। एकातिर भीड भएमा अर्काेतिर पठाउन समन्वय हुनेछ। यस्ता बत्ती बागमती पुलबाट जावलाखेलसम्म पाँच ठाउँमा राखिनेछ।
सरकारी विद्यालयमा स्थानीय अभिभावकको आकर्षण छैन र निजी विद्यालयका शुल्कका कारण अभिभावक हैरान छन्। यसमा तपाईँको ठोस योजना के छ ?
सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय विद्यार्थी छैनन्। म पढेको स्कुलमा पनि अहिले घरेलु कामदार वा भाडामा बस्नेका छोराछोरी मात्रै छन्। स्थानीयले सामुदायिक स्कुलमा गुणस्तर छैन त्यसैले एक गाँस कम खाएर पनि राम्रोमा पढाउनुपर्छ भनेर लागेको पाइन्छ। सामुदायिक स्कुल कसरी सुधार गर्ने सोचनीय विषय छ।
यो महानगर शैक्षिक हब हो। यहाँका केही विद्यालय राम्रा छन्। त्रिपद्म माध्यमिक विद्यालय, प्रगति शिक्षा सदन, सैबुमा आदर्श सौललगायतका विद्यालय राम्रा छन् र त्यहाँ अभिभावकको आकर्षण छ। अरु धेरै विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्नुको कारण अभिभावकले विश्वास नगरेको हो। यी तीन विद्यालयजस्तै अरु आठ/दश विद्यालय बनाउनुपर्छ।
निजी विद्यालयमा शिक्षा महाशाखाले अनुगमन गरिरहेको छ। हामीले अझै निजी विद्यालयको शुल्क नियन्त्रण गर्न नसकेको हो। हामीसँग शिक्षाको ऐन छैन र निर्देशिका तयार गरिएको छ। हामीले अनुगमन गरेपनि खासै प्रगति छैन। आगामी शैक्षिक क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्ने छ।
महानगरमा ठूला अस्पताल छन् तर सहरी गरीबले त्यहाँ जान सक्दैनन्। उनीहरुको स्वास्थ्यमा पहुँच कसरी पुर्‍याउनुहुन्छ ?
स्थानीय तहको स्वास्थ्य पूर्वाधार राम्रो छैन। कोभिडका कारण र ऐनको अभाव हुँदा धेरै प्रगति छैन। हामीसँग भएका स्वास्थ्यचौकी सशक्त बनाउनुपर्छ। महानगरमा संघीय सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग गरेको छैन। कोभिडको समयमा देशका ६९० स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन रु १०/१० करोड दिँदा हामीलाई दिइएको थिएन। यहाँ ठूलाठूला अस्पताल छन् भन्ने सरकारको भनाइ छ।
हाम्रोमा सात स्वास्थ्यचौकी छन् र ती साना अस्पताल हुन तर त्यहाँको अवस्था सन्तोषजनक छैन। लगानीअनुसार प्रतिफल छैन। नजिकै ठूलाठूला अस्पताल छन्। हामीले महानगरमा रहेका अस्पताललाई नै सहयोग गर्दै आएका छौँ। कोभिडको समयमा पाटन अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नहुँदा त्यसका लागि सहयोग गरेका थियौँ। अहिले धापाखेलमा आयुर्वेदिक अस्पताल बनाइरहेका छौँ। कानूनमा महानगर बन्न अस्पताल चाहिने भए पनि महानगर आफैँले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। नजिकैका सरकारी अस्पताल पूर्वाधारमा आवश्यक सुधारमा महानगरले साझेदारीमा गर्छ।
ललितपुरमा भएका कला, संस्कृतिको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनका योजना केके रहेका छन् ?
पाटन दरबार क्षेत्रलाई युनिस्कोले सन् १९८७ देखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो। यहाँको मूर्तिकला, काष्ठकलालगायतका कला प्रसिद्ध छन् र त्यसको संरक्षण आवश्यक छ। अहिले कोभिडको कारण हस्तकलामा शिथिलता आएको छ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। कलाका काममा लाग्ने जनशक्तिलाई पलायन नहुन भनेर नीति बनाइरहेका छौँ।
ललितपुर महनगरपालिका वल्र्ड क्राफ्ट काउन्सिल विश्वको ३५ औँ कला नगरी घोषणा भएको शहर हो। यसमा कोभिडका कारणले समस्या थियो। थप सुधार गरिनेछ।
फोहरमैला व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको भर नपरी महानगर आफैँले व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था छ ?
महानगरमा पहिले निर्वाचित भएर आएको आठ/नौ महिनामा नै ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहर फाल्न पाइएन। यहाँँ पनि फोहर छरपष्ट भयो र गाली खानुपर्‍यो। त्यसपछि आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले दक्षिणी भेगमा जग्गा अधिग्रहण गरेर काम अघि बढाएका थियौँ। महानगरको वडा नम्बर २१ र २२ मा हामीले छानेको जग्गामा त्यो काम गर्न हुँदैन भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्र पठाएकाले रोकिएको थियो। त्यो ठाउँ उडानको रुटमा पर्ने र फोहरले गर्दा चिललगायतका चराचुरुंगीले बाधा गर्ने प्राधिकरणको भनाइ थियो। गोदावरी नगरपालिकासँगमा कुरा भए पनि केही हुन सकेन।
अहिले हामीले काठमाडौंमा जसरी एक/दुई दिन फोहर ल्याण्डफिल्ड साइट नजाँदा नै सडकमा छरपष्ट नहुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। महानगरमा फोहर आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्छौँ। थोरै फोहर फोहर स्टेशनमा संकलन गर्छौं। दुई/तीन साइटमा विर्सजन गरेर माटोले पुरेर व्यवस्थापन गर्छौँ।
अधिकांश वडामा खानेपानीको समस्या ज्युँका त्यूँ छ, त्यसको समाधानको योजना के छ ?
काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची आयो र पुनः रोकियो, हाम्रोमा खानेपानीको समस्या छ। मेलम्चीमा पचासौँ वर्षमा परेकोभन्दा बढी पानी परेकाले आयोजनामा क्षति भयो। काठमाडौं उपत्यकामा ५० औँ लाख बस्छन्। यहाँ एउटै स्रोतबाट पानी खुवाउँछु भन्दा त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ। हामीले खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत विचार गर्नुपर्छ भनेर गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकासँग मिलेर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँगको प्राविधिक डिजाइनमा मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाबाट पानी ल्याउन काम शुरु गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेका थियौँ। अहिले सिस्नेरी खोलाबाट पानी खेर गइरहैको छ, त्यो ल्याउँदा दैनिक १३ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ।
मेलम्ची आएपछि वितरण गर्दा कहाँकहाँ पानी पुग्दैन हेरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने मेरो योजना छ। आकाशे पानी संकलन र विद्यामान मुहान पानी संरक्षणमा ध्यान दिइनेछ। त्यति गर्दा नभए डिप ट्युवबेल खन्ने छौँ। कुनकुन ठाउँमा पुग्छ र कहाँ अभाव छ हेर्नुपर्छ र त्यसैका आधारमा योजना बनाउनुपर्छ।
सार्वजनिक यातायातमा समस्या छन् र त्यसलाई सुधार गर्ने हाम्रो योजना छ। हामीले साझा यातायात सहकारी संस्थामा लगानी गरेर गोदावरी, बुंमतिमा अहिले पनि बस चलिरहेका छन् र त्यो बढाउने योजना छ। महानगरभित्र विद्युतीय बस चलाइनेछ। त्यसका लागि अहिले साझामार्फत डेढ/दुई महीनामा चार बस आउनेछन्। त्यसपछि चार किन्नका लागि प्रक्रिया हुनेछ।
महानगरले अब गाडी किन्दा विद्युतीय होस् भन्ने छ। मैले चढ्ने गाडी विद्युतीय हुन्छ। नगर प्रहरीलाई विद्युतीय सवारीसाधन चढ्नका लागि खरिद गरिनेछ। केन्द्रीय सरकारले साझामार्फत बस खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ दिएको छ। साझाले नमूना बस ल्याएको रहेछ र थप बस पनि उसले ल्याउनेछ।
उपत्यकाका नगरले समन्वयमा विभिन्न काम गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसमा के सोच्नुभएको छ ?
काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरममा १८ पालिका थियौँ। पाँच वर्षमा धेरै प्रगति भएन त्यो सिकेर आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ। विगत पाँच वर्षमा फोहर विर्सजनमा नै ध्यान गएको थियो र सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। हामीले अहिले पनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। साइकल लेनमा सबैले मिलेर गर्न सकिन्छ। एउटाबाट सिकेका काम अर्काेले गर्न सकिन्छ। वातावरणसम्बन्धी काम गर्न राम्रो मञ्च हो।
गएको कार्यकालमा महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकालाई वातावरणीय सुधार परियोजना भनेर सहयोग गरिएको थियो। सम्पदा सुधार भनेर गोदावरी चापागाउँको गुठी भवन बनाउन सहयोग गरेका थियौँ। गोदावरी नगरपालिकाको कटुवाल दहमा मन्दिर बनाउन सहयोग गरेका छौँ। अहिलेसम्म गाउँपालिकालाई सहयोग गरेको छैन।
भगिनी सम्बन्ध कायम भएको जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा वातावरण सुधारका लागि सहयोग परियोजना छ। महानगरले छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने ट्रेन्ड नै बनिरहेको छ। आगामी दिनमा हामी बजेट पुस्तिकामा समेटेर सहयोग गर्नेछौँ।
१२ जेठ २०७९ १४:१३